Samsung waxay xiiseyneysaa inay iibsato Tidal, si ay ugu istaagto Apple Music | Wararka IPhone
Samsung waxay xiiseyneysaa inay iibsato Tidal, si ay ugu istaagto Apple Music
Waxay umuuqataa in sanadkan aan markale kudhaqaaqi doonno qulqulka adeegyada muusikada. Sanadkii la soo dhaafay Apple wuxuu bilaabay adeegiisa baahinta muusikada Apple Music, halka Rdio wuxuu hoos u dhigay indhoolaha dhammaadka sanadka. Sida laga soo xigtay wararkii ugu dambeeyay ee aan la xaqiijin, Kuuriyadaha Samsung ayaa laga yaabaa inay xiiseynayaan inay iibsadaan adeegga muusikada ee Tidal, oo hadda jira hal sano. Sida lagu soo warramey ilo wareedyo kala duwan The New York Post, wada hadalada ayaa durba la bilaabay fanaanka Jay Z oo hogaaminaya.
Kuuriyaanka Samsung, ayaa iska kaashaday sanadkan socdaalka iyo albumka cusub ee Rihanna, iyagoo dhigay 28 milyan oo euro. Rihanna waa mid ka mid ah milkiilayaasha hadda ee adeegga muusikada qulqulka ah ee Tidal, adeegga muusigga ee ay abuureen farshaxan-yahannada iyo halka tayada codka uu yahay faa iidada ugu weyn ee ay ka bixiso tartamayaasha, waa laba jibaar qiimaha adeegga muusigga hadda socda.
Laakiin kaliya Kuuriyaanka ma xiiseynayaan la wareegida Tidal, laakiin Google iyo Spotify ayaa iyaguna muujiyey xiisaha ay u hayaan adeeggan muusig bilihii u dambeeyay. Waqtiga yar ee ay shaqeyneysay, Tidal wuxuu in kabadan hal milyan oo macaamiil ah wuxuuna horeyba ula kulmay dhibaatooyin dhowr ah 16-kii bilood ee uu noolaa. Bishii Diseembar ee la soo dhaafay, Tidal wuxuu shaqaaleeyay maareeyihii saddexaad si uu u maareeyo howlaha adeegga.
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ilaha la xiriira mashruuca, taageerayaasha ugu muhiimsan ee mashruuca, Madonna, Nicki Minaj, Rihanna iyo Alicia Keys Waxay ku qiyaaseen in Tidal uu haatan qiimihiisu yahay $ 250 milyan. Si kastaba ha noqotee, ilaha la xiriira warshadaha waxay xaqiijinayaan in adeeggan muusigga ee dhimista uu leeyahay qiimo ku dhow 100 milyan oo doolar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung waxay xiiseyneysaa inay iibsato Tidal, si ay ugu istaagto Apple Music
Taa bedelkeeda waxay ka soo horjeedaa Spotify, miyaadan u malayn?
Samsung waxay khibrado xun kala kulantay bakhaaradeeda, dhawaanahan waxay xirtay dukaankeeda appka, wax walbana iyo waxay siisay barnaamijyo lacag leh.
Dhinaca kale, Tidal wuu wanaagsan yahay, wuxuu diiradda saarayaa maqalka dhabta ah, suuq aan Apple Music iyo Spotify midna daboolin.
Marka hore waxay la tartami doontaa Apple Music, maadaama ay horay ugu sii rakiban laheyd dhammaan aaladaha ay shirkaddu iibiso sanad kasta oo ay yihiin malaayiin badan. Spotify waqtigan xaadirka ah oo ay la socoto macaamiisha bixisa 28 milyan, waa meel fog oo u taal qof walba maanta, oo ay ku jiraan Apple.
Waxay sidoo kale u noqon kartaa war wanaagsan macaamiisha Apple, maaddaama jiidista ay bixiso dhawaqa ugu sarreeya ee laga yaabo inay ku riixdo inay sidaas sameeyaan Apple ayaa sidoo kale sameysa tayada maqalka ee Apple Music.
HAHAHA !! kaliya aqrinta cinwaanka waxaanan u dhimanayaa qosol, sida asxaab badan ay halkan ka yiraahdaan .. miyay tahay inaan iska taagno Apple Music?. Anigu waxaan ahay isticmaale Apple cimrigayga oo dhan mana adeegsado ama ma qorsheynayo inaan isticmaalo, taas waxaan kuu sheegayaa sida wanaagsan ee Music Apple iila muuqato. Websaydhkani wuxuu leeyahay laba qaybood oo war ah oo ah xooggiisa uu ku difaaco ilkaha iyo ciddiyaha. Apple Music iyo iPhone 5se; labadoodaba waxaad isku dayeysaa inaad abuurto bad muran ah. Adigoon si cad u helin, maxaa yeelay aragtida ayaa ah xiisaha ay akhristayaashu ku kicinayaan boostada aad ku daabacday mowduucyadan.
IOS 10 fikrad leh 3D Touch oo ku taal Xarunta Xakamaynta
Tim Cook wuxuu soo jeedinayaa inay ku shaqeeyaan gaariga Apple